किन दुख दिन्छ चितवन प्रहरीले गैडाकोटवासीलाई ?
By administrator on	 June 4, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
डोलराज रानाभाट, २२ जेठ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले गत वर्षको चैत्र ११ गते देखि लकडाउन सुरु गर्यो । आज ७३ औँ दिनमा लकडाउन भइरहदा यसको मोडालिटी परिवर्तनको माग जोडदार उठेको छ । अन्य क्षेत्रले मोडालिटी को कुरा उठाएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भने अत्यावश्यकमा राखेर निर्वाध संचालनको अनुमति दिइरहेको छ । तर अहिले यसमा पनि विभिन्न वाहानामा दुख दिन थालेपछि स्थानीय स्तरमा पनि व्यापक विरोधका स्वर उठ्न सुरु भएको छ । हिजो जेठ २१ गते स्वास्थ्य व्यवसायी संघ गैडाकोटका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद घिमिरेले फोन गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्वाध संचालन तथा संचालकलाई परिचय पत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिइरहदा चितवन प्रहरीले निषेध गरेपछि उहाँको आक्रोश स्वभाविक थियो र भन्नुभयो,“नेपालका कानुन दैवले जानुन भनेजस्तो चितवन प्रजीअ बाट स्वास्थ्यकर्मी आवतजावत सहजताको आश्वासन मात्र कार्यान्वयन शुन्य सम्पुर्ण भरोसा स्थानीय मिडियाहरुको ।”
पटक पटक दुख दिन सुरु भएपछि यसअघि गैडाकोटका स्वास्थ्य व्यवसायीहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराई सँग डेलिगेसन जानुभएको थियो । उक्त समयमा अव बाट दुख नदिने आश्वान दिएपनि व्यवहारमा त्यसो नभएपछि अध्यक्ष घिमिरेले विजय एफएमलाई फोन गर्नुभयो ।
यस अघि पनि कयौँ पटक गैडाकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत शाखा प्रमुख झलकराज पौडेल, पितौजीका चिकित्सकलाई पनि परिचय पत्र देखाउदा समेत घण्टौँ पुलमानै रोकेका थिए । त्यो समय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एकनारायण कोइरालाले हामी सुधार्र्छौँ भन्नुभयो ।
चेकजाँचको अग्रपंक्तीमा उच्च जोखिम मोलेरै चितवन प्रहरीले सरकारको नीतिलाई कडा रुपले कार्यान्वयन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी नान्तीराज गुरुङ भन्नुहुन्छ,“ चेकजाँच कडा पारिएको मात्रै हो । त्यसरी रोक्ने हाम्रो मनसाय नै छैन । गैडाकोट नाकामा मात्रै होइन जिल्लाकै पश्चिम, दक्षिणबाट भरतपुर आउनेहरुलाई पनि त्यति नै चेक गरिएको छ ।”
चेकजाँचको अग्रभागमा खटिने प्रहरीसँगको समन्वय विना अहिलेको महामारीमा सहज छैन । त्यसैले चितवनका एसपी गुरुङलाई परिचय पत्र भएका स्वास्थ्य व्यवसायीलाई रोक्ने काम किन ? जसले चितवनबाट औषधि खरिद गरी लामो समय गैडाकोटमा विक्रि वितरण गर्दै आइरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो,“ त्यसो गरिएको छैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने म निर्देश गरिहाल्छु । यो त हामीलाई नि सजिलो हो की औषधि उतै किन्न पाएपछि मानिसको आवागमन यहाँ कम हुन्छ । ”
तर औषधि व्यवसायीले आफ्नो परिचय पत्र र साथमा फार्मेसी गैडाकोटमा छ भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यवसायको प्रमाण र परिचय पत्र भएपछि हामीले रोक्दैनौँ गुरुङले भन्नुभयो । सम्भव भएसम्म सवै व्यवसायीहरु मिलेर एकै पटक सामान ल्याउने गरी कार वा भ्यानको प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएका गुरुङले अन्यथा मोटरसाइकल वा स्कुटी भएपनि परिचय पत्र र फर्मको प्रमाण पत्र साथमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ । लुकिछिपि मानिसहरु प्रवेश गर्ने वढेपछि मोटरसाइक वा स्कुटर संचालमा सामान ओसार्न कडाई गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
भारतबाट लुकिछिपि आई चितवन छिर्न खोजेपछि कडाई
सुरुवाती चरण देखि केही वीचसम्म अहिलेको जसरी कडा चेकिङ थिएन नारायणी पुलमा । एसपी गुरुङ भन्नुहुन्छ,“ अत्यावश्यक को वाहाना वनाएर भारतबाट आएकाहरु प्रवेश गर्न थालेपछि संक्रमण वढाउने सम्भावनाले कडाई गरिएको हो ।” पछिल्लो समय मोटरसाइलकमा आएर अत्यावश्यक काम परेको भन्दै प्रवेश गर्नेहरु वढेको गुरुङले बताउनुभयो ।
सरकारले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाएको छ त्यसको पनि कार्यान्वयन हो गुरुङ भन्नुहुन्छ, तर गैडाकोटको अवस्था फरक भएकाले हामीले रोकेका छैनौँ । भतरपुर आउनेहरुलाई २४ कोटी, गोन्द्राङ लगायतमा पनि यहाँ जस्तै कडा पारिएको उहाँको भनाई छ ।
साथै अहिलेको समय प्रहरीले रोकेर सोध्ने वित्तिकै झर्कने, चित्तवुझ्दो जवाफ दिन नमान्ने जस्ता व्यवहार नगर्न पनि गुरुङले आग्रह गर्नुभएको छ । गुरुङ भन्नुहुन्छ, “प्रहरीको काम चेकीङ गर्ने हो । जनताले अत्यावश्यकको प्रमाण देखाउने हो । तर सोध्ने वित्तिकै झर्कने नगरिदिनु होला । सोधेकै भरमा जान दिएन भन्नु आफैमा उपयुक्त होइन । ”